Otu esi enweta Job na Dubai na 2020 site na # No.1Guide】 Na-enyere Ndị Ọhụụ Aka!
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at April 20, 2019
Gị onwe gị bido ịchọ ma ọ bụ inwere ụfọdụ ozi gbasara ọrụ Dubai. Ma ị bụ ihe ọhụrụ maka ahịa ọrụ na UAE. Youkwesịrị iti ụlọ ọrụ kacha ibu. Na onye ọrụ kachasị mma na Dubai ka bụ Emirates.
Ụlọ ọrụ Dubai City na - enye ozi oma mgbe nile. Oge a anyị na-enye ozi gbasara otu esi agafe Emirates Cabin wiree emeghe ụbọchị / Ntụle + Ajụjụ ọnụ (ajụjụ banyere mbanye + ajụjụ)
Employmentchọta ọrụ ọkachasị na United Arab Emirates enwere ike iwe oge. Ga-echetarịrị na ndị na-arụ ọrụ ego na-aga njem ruru narị narị ọ bụla. Ma n'ezie ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Emirates. Amachaghị m banyere gị. Yabụ ha ga-elele CV ahụmịhe gị, na n'ezie, agụmakwụkwọ gị, nke ahụ ga-enyere ha aka ịchọpụta ụfọdụ gbasara onwe gị na kedu ihe ị na-eme na ndụ gị.
Yabụ mgbe niile gbaa mbọ hụ na ị ga-eso ntuziaka anyị n'okpuru. N'ihi na ihe anyị na-eme maka ndị na achọ ọrụ anyị na-anwa inye aka ị ga-enweta ihe niile ị nwere ike n’usoro nke nyocha oru in Dubai na Abu Dhabi. Anyị na-enye ụfọdụ ndụmọdụ na ozi gbasara ọrụ na otu esi ejikwa ngwa maka ndị nwere ike ịrụ ọrụ na United Arab Emirates na oge ụfọdụ n’obodo Ọwara.
Naanị ijide n'aka na ị ga-eme ya nwee ezigbo ozi zuru oke. Anyị na-enye ozi gị maka otu esi eme ngwa gị na Emirates n'ụzọ ziri ezi.
Na vidiyo a, ị nwere ike ịchọta ọmụmaatụ etu esi emejupụta Emirates Cabin Crew Online Job Application na ha ọrụ saịtị (njikọ ahụ bụ - http://emiratesgroupcareers.com/engli…).
Usoro itinye akwụkwọ dị ezigbo mkpa na nchọta ọrụ gị. Needkwesiri ịdị 100% mgbe niile na ngwa gị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị ntụpọ n'ihe banyere mkpa mbanye. Nwee nlele N'okpuru ihe nkiri YouTube. Emere nwoke a maka ndị na-achọ ọrụ na ndị si gburugburu ụwa ndị amaghị etu esi edejupụta akwụkwọ nke ụlọ ọrụ Emirates. Naanị n'ihi na ọ bụ ihe siri ike ịme ụfọdụ ndị na - enyere ndị ọzọ aka n'ezie ijikwa onwe ha na inye ha ihe n’ihi na unu ụmụ mmadụ ozi ọma gbasara otu esi eme nke ahụ n’ụzọ kwesịrị ekwesị. Nke ahụ ga - enyere gị aka inweta akwụkwọ anamachọihe gị n'ihu ndị nnọchite mbanye ụlọ ọrụ kachasị na United Arab Emirates.
Nke mbụ, Mee ezigbo CV
CV zuru oke, ma ọ bụ gịnị?
You na-eziga otu CV, ọ bụrụgodị na ịchọrọ maka ọkwá dị iche iche? “N'ogbe” ịzaghachi mgbasa ozi nwere ike belata ịdị irè nke ọchụchọ gị. Isi ihe ga-eme ka ihe gazie agazie bụ nhọrọ nke ozi na ngosipụta nke eziokwu ndị dị kachasị mkpa nye onye were gị n'ọrụ.
Ibidoghachi bụ otu n'ime akwụkwọ kachasị mkpa. Na Emirates, na mbido, nke a bụ naanị akwụkwọ nke ahụ nwere ike ịchekwa ndụ gị. Ọ dị mma, ndị na-ekwu okwu elebara anya n'ozuzu na-ekwu anaghị a attentiona ntị ịmaliteghachi na leta mkpụrụedemede kwesịrị ekwesị. Nke a bụ gịnị kpatara Dubai Companylọ Ọrụ Obodo na-etinye nduzi maka otu esi enweta Job na Dubai na 2020 ?.
Nzaghachi gị na onyinye a nwere ike ịbụ ihe akaebe nke nkwa na nka. Ọ dị mkpa na ị na-egosipụta na ị na-emezu atụmanya nke ndị nwere ike ịrụ ọrụ na Dubai. N'oge nyocha nke mgbasa ozi, ị nwere ohere ikpebi ma ị nwere nkwadebe kwesịrị ekwesị ọ bụrụkwa na afọ ojuju maka ọnọdụ onye were gị n'ọrụ.
Ikwesiri icheta nke ahụ na UAE. Enwere puku kwuru puku ndị na-achọ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Ọ bụrụ n ’ị chee na ị bụ onye ziri ezi, kwuo ozi banyere onwe gị n’ụzọ doro anya ma chee echiche.
Isi ihe na-eme ka ịmepụtaghachi ọkachamara bụ nyocha ọrụ
Anyị na-achọ onye ọkachamara ...
Ụlọ ọrụ anyị na-achọ ndị dọkịta na Dubai
Tupu ị zaa mgbasa ozi ahụ, tụlezie ma i nwere ikike ziri ezi iji were otu ọnọdụ. Mgbe ị na-eme nyocha ahụ. ị nwere ike ikpebi na ọ bara uru ịmalite ọrụ, dịka ọmụmaatụ.
Gbaa mbọ hụ na ị na-etinye akwụkwọ maka mgbasa ozi kwesịrị ekwesị. Ọmụmaatụ, na-eziga CV gị ka puku kwuru puku ndị ọrụ onye nwere ike icho inweta ọkachamara n’ịkpa ezé na ahụmịhe gị dị n’ahịa anaghị enyere gị aka ma ọlị.
Ibu ọrụ ka ị na-achọ ọrụ
Site na nyochaa ogo ọrụ aga enyere ọnọdụ ahụ, ị ​​ga - achọpụta ma will ga - enwe ike rụọ ọrụ gị nke ọma na ahụmịhe gị na ike gị. Ọ bụrụ na omume ndị a na-eme na ụlọ ọrụ ndị gara aga kwekọrọ n'ihe ndị edepụtara na ọkwa ahụ, ị ​​ga-enwe ya ohere iji zute ọrụ ọhụrụ gị. Ọ dị mkpa igosi na CV gị na ị nwere ezi ihe ọmụma na nka.
Omuma x nke x na af o ihe yiri ya. Ọ na - eme na ndị were ọrụ anaghị atụ anya na ahụmịhe. N'ọnọdụ a, ọ bara uru ilekwasị anya na nkọwa nke agụmakwụkwọ na nkà. Otutu oge, otodi, ime ihe di nkpa.
Iji gosipụta na ijidelarị ọkwá yiri nke ị na-achọ ugbu a, ịkọwa akụkọ gbasara ọrụ gị site na ịnye aha ọrụ, oge ọrụ, na ibu ọrụ gị. Ọ dị mkpa na ọdịnaya ndị a jikọtara ọnụ ya na oru ndi egosiri na enye oru.
Ihe omumu ... / ikikere ...
Nọọsụ, injinịa ihe owuwu, onye nkuzi - ndị a bụ ọmụma atụ nke ọrụ a haziri ahazi, yabụ ndị enwere ike igosipụta ya ma ọ bụrụ na ịnwere ikike. Ọzọkwa n’ihe banyere ọrụ ndị ọzọ, dị ka onye ọrụ PR, onye ahịa ma ọ bụ onye na-eme programmer, onye were ya n’ọrụ nwere ikike na-atụ anya inweta agụmakwụkwọ pụrụ iche site n'aka onye chọrọ ya.
Ọ bụghị naanị ụdị agụmakwụkwọ ị gụsịrị. Ọ dịkwa mma ịkọ aha nkuzi na otu nkuzi oge ị nwetaworo ma zụlite ụzụ dị mkpa na ọrụ. Dịka onye na-ese ihe eserese, ịnwere ike ide, dịka ọmụmaatụ, gbasara usoro njikwa mmemme, dịka Adobe Photoshop, InDesign ma ọ bụ Corel Draw. Mgbe ịchọrọ itinye akwụkwọ maka onye nkuzi nke onwe gị, ọmụmụ akwụkwọ postgraduate na ngalaba nke usoro nri, wdg ga-aba uru.
Ịmara ihe omume kọmputa dị ka ...
Enwere ike iji asambodo iji nye azịza ngwanrọ a kapịrị ọnụ. Pọtụfoliyo agbakwunyere na CV gị enwere ike iji ya gosipụta ike gị.
Amata asụsụ mba ọzọ na ọkwa ...
Ọ dị mkpa na ikwuputa ọkwa nke oganihu - Nke a metụtara ọ bụghị naanị na asusu asusu kamakwa omuma nke mmemme komputa. Iji nweta nkwenye nke asụsụ, ọ bara uru ịgafe asambodo asambodo. Dịka akụkụ nke nkwadebe, ị nwere ike ịga otu oge ị ga-amụ, maka ọmụmaatụ, usoro ule.
Nkwukọrịta okwu, ikike ijikwa onwe gị na oge… - nkà dị nfe Ọ dị mma ịkpachapụ anya na, ka esi nyocha CV gị, ndị na - ewe mmadụ ọrụ achọpụtala na ịhazie onwe gị. Nkwenye nke ikike dị otú a nwere ike ịbụ na nzukọ nke nzukọ ma ọ bụ ijikọta ọrụ na ọmụmụ. Ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti ọdịmma ụlọ ọrụ na ọrụ dị nro ị nwere.
Mgbe ị na-emepụta CV, ọ bara uru na-ezo aka na ọzọ, nhọrọ ihe ndị onye ọrụ were ya kwuru. Nke a ga - abụ ihe bara uru nke nwere ike ikpebi na a ga - anabata gị ka ị rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị ga-ahụ - Anyị na-enye ọrụ ọrụ na Dubai ...
Mgbe ị gụchara akụkụ ikpeazụ nke ọkwa ahụ, ị ​​nwere ohere ịhụ ọ bụrụ n’ ọnọdụ ndị onye were gị n’ọrụ na-enye ga-enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị. Ọ bụrụ n ’ị chere ee, ọ bara uru ịkọwa na nchịkọta ọkachamara.
CV a nụchara anụcha nwere ike inye gị ajụjụ ọnụ ma na nsonye na-eme ka eziokwu ahụ bụ na a ga-anabata gị ịrụ ọrụ. Onu ogugu CV zitere na nzaghachi banyere mgbasa ozi adabaghi; Ihe kachasị mkpa bụ njirimara ha. Ihe nchoputa di ị ga-arụpụta ọrụ ma ọ bụrụ na ahaziri CV gị. Mgbe ị na -emepụta akwụkwọ, ọ bara uru ilezi anya ọ bụghị naanị ọdịnaya ahụ kamakwa n'ụdị ya - nke ọma ma doo anya. Will ga-emepụta akwụkwọ ọkachamara na-eji ụlọ ọrụ Dubai CV onye okike.
Kedu CV na-eme ka ihe ịga nke oma na 2020?
Ihe okike ma na nkenke. Oge a, mana na njikọta ya na usoro omenala. Na mbu, mana nfe. N'ụzọ dị ịtụnanya, mana ọ bụghị ihere. N'ụzọ ziri ezi, nke a apụtaghị na-agwụ ike. Anyị na-adụ gị ọdụ ka esi mee ka CV ọhụrụ gị n’ime afọ ọhụụ iji dọta uche nke ndị na-ewe ndị ọrụ ọrụ.
Na-ezipu ngwa kwa ụbọchị, mana enweghị nzaghachi ?. Do maghị ihe bụ nsogbu ahụ? Ikekwe, ị ga-elele anya nke ọma na CV gị, yana ezigbo ọ bụrụ na i nye mmadụ mmadụ ka ọ gụọ ma ọ bụ mara asụsụ Bekee dị mma. Dabere na ndị ọkachamara HR, omume a bara ezigbo uru. Ọtụtụ mgbe, akwụkwọ ntinye akwụkwọ jupụtara na asụsụ, stylistic, mkpoputa na njehie ndenye.
Karịsịa, ndị ọgbọ Y- a na-elekwasị anya ugbu a na ịmaliteghachi ihe okike, mana ichefu idebe iwu nke mkpoputa ziri ezi na imehie mmejọ asụsụ ndị mbụ. John Smith, Onye isi oche nke ụlọ ọrụ Dubai City
Ihe karia akwukwo
CV n'ụdị mpempe akwụkwọ mgbasa ozi, akwụkwọ na-atọ ọchị ma ọ bụ vidiyo. Ọdịnaya gosipụtara site na akara ngosi, akara, eserese. Imesi ike na infographic. Fashiondị ejiji dị ugbu a apụta na ngwa. Otutu ndi mmadu n’eme ihe CV ha dika onyinye.
A nabatara ụdị okike a, mana onodu na mgbakwunye na ịchọ mma na ụdị adịghị mma, a ga-enwekwa ozi dị mkpa. Maka onye na-ewe maka ọrụ, nghọta dị mkpa, data akọwapụtara maka ebe na mgbe mmadụ na-arụ ọrụ, ihe o mere, ụdị ọrụ o nwetara na ụdị ahụmahụ o nwetala.
Uzo ichota CV emechaghi eweta uru bara uru - John kọwara. N’uche ya, ihe na-adọrọ mmasị bụ ịkwadebe CV n'ụdị ọdịnala ma tinye njikọ maka ọrụ gị, Pọtụfoliyo ma ọ bụ weebụsaịtị ebe ị nwere ike ịhụ mmepe nke eserese ahụ, dịka ọmụmaatụ.
Ndi okacha amara nke HR na-ejikwa nkwụghachi ụgwọ site na akwụkwọ ọgụgụ na teknụzụ. - Ọbụghị ndị na - ewe ọrụ ọ bụla nwere ike, dịka ọmụmaatụ, iji koodu QR na ngwa mkpanaka nke na-enye ohere ịgụ CV. Ọ ka mma ịgwọ ya dịka mgbakwunye, ihe karịrị usoro amamịghe ọkọlọtọ - na-emesi John Smith ike.
Kedu ka ị ga - esi pụọ na igwe mmadụ ahụ? Kedu ihe, na-abụghị infographics, nọ n’elu ugbu a?
Nchịkọta nkeonwe - anyị nwere ike itinyekwu ozi na ya karịa na CV omenala, gosipụta agụụ na nkà gị.
Akaụntụ na ụzọ mbanye (dịka Akaụntụ Ọrụ M) bụ otu ebe ndị ahụ na weebụ na-ejikọ anyị na ndị isi anyị nwere ike. Ọ bara uru imelite akwụkwọ gị ebe a na afọ ọhụrụ.
The CV n'ụdị vidiyo - Nke a bụ ụzọ dị mma iji gosi ụlọ ọrụ nrọ gị, mana ọ bụrụ na anyị na-atụ ụjọ n'ihu igwefoto, anyị nwere nsogbu na ịkọwa okwu na ịsụ were were n'ọnụ, ikwu okwu n'enweghị nsogbu - amanye onwe gị n'ụdị ngwa a.
Ndị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ - bụ ndị isi na-eleta, yabụ ọ bara uru na-elekọta profaịlụ ọkachamara na-agba ọsọ. Ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ nwere ike inyere gị aka ịchọ ọrụ. A na - egota ụfọdụ akụkọ banyere ọrụ ha na Facebook portals.
N'ịkọwa ihe omume ma ọ bụ ihe omume anyị sonyere na ya, na-ekere òkè na ihe ịga nke ọma ọkachamara - Anyị nwere ike ibudata anya onye na - agụ ọrụ. Ọ dịghị ihe n'ike
Nkwupụta nke HR nke Dubai Ọrụ Ahịa gosipụtara na okike, ịmaliteghachi pụrụ iche n’ime ọrụ dị iche iche. Enwere ike iru ha site na itinye akwụkwọ maka ịchọpụta okike na ịdị nkọ, dịka onye ahịa ma ọ bụ ọkachamara na mgbasa ozi, ọkachamara na ọrụ ndị ahịa ma ọ bụ onye na-ahụ maka ngwa mkpanaaka, ga-ewetara CV ya, dịka ọmụmaatụ n'ụdị egwuregwu kọmputa ma ọ bụ weebụsaịtị. N'otu aka ahụ, infographic uche rụọ ọrụ na mpaghara okike ọ bụla ọzọ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ahụ esighi anyị ike ikwu okwu banyere ahụmịhe ọkachamara anyị na vidiyo ma ọ bụ na-ese akwụkwọ na-atọ ọchị - ka anyị hapụ ya ka ọ ghara ka anyị soro usoro a. - Oge ụfọdụ ịmalitegharị bụ naanị nnomi inept, mbipụta ndebiri. Orrụ ọrụ adịghị mma na-agbada onye ochichi - John Smith kwuru.
Egwuregwu Ma Ọ Bụ Eziokwu - Akwụkwọ akụkọ kama nke CV!
Iwepụta akwụkwọ nta agaghị abụ ọrụ mgbe ụfọdụ! Ọ nwere ike ịbụ ụzọ ịchọta ọrụ na Europe. David Dąbrowski bụ onye ọchụnta ego Poland bụ onye nyepụtara mpempe akwụkwọ na-ekwupụta onwe ya dị ka onye na-achọ ọrụ n'okpuru ụlọ ọrụ Warsaw.
Pracuj.pl jụrụ David ma echiche a gbanwere ịbụ onye kụrụ ma ọ chọtara ọrụ nrọ ya.
Ụzọ ndị nwere ike ịchọta ọrụ nwere ike ịdị iche. Mgbe ụfọdụ ndị na-agbụ mbadamba nkume na ọdịdị ha ma ọ bụ mepụta fanpages na Facebook, David kpebiri ... efere! Ọ na-arụ ọrụ?
Were bụbu na-achọ ọrụ n'ụzọ na-abụghị ọkọlọtọ…
David Dąbrowski: Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ nweghị ọkọlọtọ. Enwere m mmetụta na usoro m ji mee ihe amaara ebe niile, ọ bụ ezie na n'ezie ndị mmadụ na-eji ya icho acho oru adighi adighi acho.
Kedu otu o si yie?
David .: Ana m enyefe mpempe akwụkwọ (ịchị ọchị). Mana obughi akwukwo akwukwo. Egosiiri m ha na foto ndị ọkachamara, etinyekwara m nkọwa kọntaktị m na koodu QR n'otu akụkụ nke mpempe akwụkwọ ahụ. na-atụgharị na profaịlụ ọkachamara m, na aka nke ọzọ gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi maliteghachi. Ọ dị mma, ana m enyepụ ọ bụghị naanị, n'ihi na n'etiti 8 na 9: 30 n'ụtụtụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ụlọ ọrụ buru ibu na Warsaw, ndị ọrụ ụra na-amụmụ ọnụ ọchị na egbugbere ọnụ ha. Otutu n’ime ha, mgbe ha nwetasịrị mpempe akwụkwọ ahụ, chiri ọchị.
Ebee ka echiche maka ụdị a si?
David.: Ọ masịrị m ime ụdị ihe ahụ! Anọ m na-achọ ọrụ n'ahịa m. Site na omume a achọrọ m igosipụta na m bụ okike, na-eche echiche, echiche m na-elekwasị anya na inweta ebumnuche ụfọdụ na iwepụta mmetụta ụfọdụ. Mpempe akwụkwọ ahụ kwesịrị igosipụta nke ahụ Abụ m onye ọrụ nrọ nke ụlọ ọrụ ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ nweghị ihe dị njọ n'ịchọ ọrụ dịka enweghị ọrụ na ichere ozi ịntanetị na-adịghị asọ. Achọrọ m ime ihe okike, pụọ na mgbidi anọ. Ọ bụ nnukwu ahụmahụ.
Otú ọ dị, ị ga-etinye ego na ngwọta dị otú ahụ ...
David.: Emebere mpempe akwụkwọ ahụ nke aka m, foto nke onye ọrụ ibe m na - ese foto mgbe m nwetasịrị ego, emekwara m onye ọkachamara ma emekwara m igwe mgbasa ozi CV dị iche iche, mana ụlọ obibi akwụkwọ enyelarịlarị akwụkwọ ahụ. Ọzọkwa, ọnụahịa ahụ adịchaghị elu, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ego na PLN 1,200. Enweghị m ike ịgọnahụ na usoro nke ịkwadebe mpempe akwụkwọ naanị were m ihe dị ka izu atọ nke ọrụ ụbọchị ọ bụla ka awa ole na ole gasịrị. Mana ọ bara uru itinye oge a.
Gịnị si na ya pụta?
David.: Nsonaazụ ndị ahụ dị ịtụnanya. Ewezuga nzaghachi ndị sitere na nnata mpempe akwụkwọ ahụ, nke kachasị dị mma, enwetara m ọtụtụ ozi-e na ozi ekele maka echiche ahụ. Ọ dị m mkpa maka na oburu na mmadu na acho oru, ọ naghị adịkarị mma.
Nke ahụ bụ ihe mkpali dị ha mkpa. Emere m mkpokọta mpempe akwụkwọ 1000, jisiri ike nyefee narị ise na otu izu na ọkara, mgbe ahụ, eweghị m ọzọ, n'ihi na ụbọchị ole na ole mgbe mmalite nke mkpọsa ahụ m bidoro ka a kpọọ ya maka ajụjụ ọnụ. Enwere ngụkọta nke iri na abụọ, ụfọdụ n'ime ha na ụlọ ọrụ kachasị na Poland.
Kedu ka ị si chọta ọrụ?
David: Ọ nwere ike iyi ihe ijuanya, mana Achọtara m ọrụ maka Dubai City Company (ịchị ọchị). Agbanyeghị na enwetara m ọtụtụ ọrụ na-enye ekele maka mpempe akwụkwọ, ọ bụ site na ya Dubai City Companylọ ọrụ m batara na onye were m n'ọrụ ugbu a. Ọ bụ ya nyere m ọnọdụ kachasị mma ma egbughị oge n'ime mkpebi maka ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ m ugbu a.
Ọ bụrụ na e nwere mkpa, ị ga-emegharị nnwale a?
David: M ga - eme ihe niile iji gbochie mkpa a, mana ọ bụrụ na a manye m ime ya, aga m eme ihe dị egwu karị. Ọ na-amasị m ịme ihe ndị ọzọ anaghị eme!
Ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-achọ ọrụ na Europe taa?
David: Ọ bụrụ na m nwere ilebara ihe anya, ọ ga-abụ ya. Mee ihe ndị ọzọ anaghị eme, kwenye na onwe ha nakwa na ọ bụrụ na i tinye ịnụ ọkụ n'obi gị niile, nka na oge gị n'ime ihe kachasị mfe otu, can gha eme otutu.
Ihe 8 mere ka o sie ike ịchọta ọrụ
Ihe mgbochi inweta ọrụ nwere ike ịbụ ezughị ezu ma ọ bụ iru eru ruru eru. Ọtụtụ na-adaberekwa n'ụkpụrụ gị. Tụleekwa ma ọ bụrụ na enweghi ozi nke ndị na-ewe ndị ọrụ n’ebughi echichi site na iziga CV nke n’onweghi.
1. Obere nkwa maka ịchọ ọrụ
Nsogbu dị na ịchọta ọrụ nwere ike ịbụ n'ihi enweghị ike itinye akadịka ọmụmaatụ, na-eziga CV gị na-ezighi ezi. Ọ dị mkpa ka ị lelee ọrụ enyere dị iche iche, dịka na Bayt.com Portal - iji ngwa ekwentị na-enye gị ohere ịchọgharị mgbasa ozi ebe ọ bụla, oge ọ bụla. Tupu izipu CV, ijide n'aka na ị gụrụ ihe onye were gị n'ọrụ chọrọ ma hazie CV gị ka ewee hazie enye ya. Ọ bụrụ na iru eru gị ezughi maka ihe enyere gị, ozi a bara uru - ịkwesiri ilekwasị anya n'ịzụlite ikike ịchọta ọrụ na ụlọ ọrụ ị nwere mmasị na ya.
2. Njehie na mmejọ na CV
Onye nwere ike ịrụ ọrụ nwere ike tufuo njehie na CV gị. Biko lelee ọdịnaya ahụ nke ọma tupu izipu akwụkwọ ahụ. Biko mara na enweghi ndetu, idepụtaghị ihe ma ọ bụ ihe ọgbụgba.
3. Enweghị data dị mkpa na CV
Ihe isi ike ịchọta ọrụ nwere ike ịbụ enweghị ike ịkpọtụrụ gị. Ekwesịrị itinye nọmba ekwentị na adreesị ozi-e na CV. Y’oburu echefula banyere ya, ndị na - ewe mmadụ ọrụ agaghị enwe ike ịzaghachi na ngwa gị.
4. Adreesị onye nnata ezighi ezi nke akwụkwọ ahụ
Tupu iziga gị CV, na-achọpụta mgbe niile na ịbanyela adreesị ozi-e ziri ezi. Eleghi anya ụlọ ọrụ ahụ anaghị aza arịrịọ gị maka na - dịka ọmụmaatụ, n'ihi leta ezighi ezi - ọ natabeghị akwụkwọ kwesịrị ekwesị ma ọlị.
5. Enweghi ike a choro
Ihe mgbochi mgbe ịchọta ọrụ nwekwara ike ịbụ ọdịda imezu ihe achọrọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ ịma asụsụ Jamanị ma na-ekwupụta Bekee, enwere ike ịjụ ịchọrọ gị. Tupu izipu CV gị, gbaa mbọ hụ na nkà gị kwekọrọ n'ihe ndị were gị n'ọrụ chọrọ.
6. Enweghị ahụmahụ / oke iru eru
Ihe isi ike na ịchọta ọrụ nwere ike isite na enweghị ahụmịhe ọkachamara ma ọ bụ asambodo oke. Ọ bụrụ na onye na-ewe mmadụ n'ọrụ na-achọ mmadụ site na nke 3 afọ nke ahụmịhe, o nwere ike ọ gaghị akpọ onye ga-aga akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ya. Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ ahụmịhe na-abụ ihe mgbochi.
Onye were gị n'ọrụ maara na iru eru gị gafere mkpa ya ga-atụ egwu na ị ga-akwụsị ọrụ ngwa ngwa ịchọrọ maka nnukwu nsogbu na ohere ọrụ aka.
7. Omume na-adịghị mma n'oge mkparịta ụka ahụ
Ọ na - arụ ọrụ - CV gị nwere mmasị onye na-ewe ndị mmadụ ọrụ ruo n'ókè nke na ọ kpọrọ gị maka ajụjụ ọnụ. Nsonaazụ ọ dabere na omume gị - ọ bụrụ na ị ghara ịkpa oke, ị ga-atụfu ohere ọrụ gị. Oge akara aka gị, ihe ọmụma banyere ọrụ ụlọ ọrụ na ezigbo ebumnuche ọrụ dị mkpa.
Enwere ike ịjụ gị ka ị gbanwee ọrụ, ya mere dịrị njikere ime ya. Ọ bụrụ na agbanyeghị mgbalị gị, ị nwetaghị onyinye ọrụ, nweta nkwubi okwu - ọ ga-enyere gị aka ịjụ onye nzaghachi maka nzaghachi banyere aka gị. Eleghi anya onye ọzọ na-achọ maka ọnọdụ a kwadoro dị mma karịa omenala nzukọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
8. Enweghị okwukwe na ikike onwe gị
Ọ bụrụ na nkà gị na ahụmịhe gị masịrị onye na-ewe mmadụ ọrụ, ọ pụtara na inwere ohere iji nọrọ n'ọnọdụ ahụ. Site na igosiputa ejighi n'aka, enweghị ntụkwasị obi na ntụkwasị obi maka ọrụ, ị nwere ike tufuo ohere irụ ọrụ. Iji mee ka ị nwekwuo ùgwù, chee echiche banyere ikike gị na iru eru gị - ọ bụ ekele maka ha ị nwere ike ịnabata ọrụ nrọ gị.
Kedu ka m ga-esi chịkọta m na ndụ ọkachamara gị, ma n'ụzọ dị mkpirikpi?
CV kwesịrị ịbụ nchịkọta nke ihe ị rụburu. Ọ ga-eburu n'uche nkọwa nke ahụmịhe ọkachamara na nka. Atọ okwu atọ bụ isi: akọwapụtara, kpomkwem na n'isiokwu.
Ihe kachasị mkpa nke ọrụ CV
CV bu ihe ngosi gi. Okwesighi ka o doo anya na nwekwaa ike karie ma o kwere omume, kama o nweere onwe ya na udiri njehie nile - ihe doro anya, mkpoputa okwu na otite. Ihe ndị kachasị mkpa ị ga-etinye n’omọghachi gị ka etinyere n’okpuru.
CV ga-enwerịrị aha na aha nnabata onye ahụ, tinyere nkọwa ndị ga-enyere gị aka ịkpọtụrụ ya: nọmba ekwentị na adreesị ozi-e. Ọ dị mkpa iji adreesị ozi-e ọkachamara.
Mụta na CV
CV kwesịrị inwe ndepụta nke ọnọdụ mbụ enwere na mbụ - ọkachasị ndị na-egosi ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ. Okwesiri ịkọwa ha na nkenke, na-ekwu maka ókè ọrụ dị. Ekwesịrị igosipụta ọnọdụ ndị dị n'ọnọdụ dị na usoro oge usoro azụ - bido n’ọrụ ikpeazụ emechara.
A nkọwa nke nkà
Akụkụ a ịmalitegharịa kwesịrị ịnwe ozi gbasara asụsụ ndị ọzọ gbasara asụsụ ala ọzọ na ntozu ọkachamara. Ọ dịkwa mma ịkọtara nkà dị nro - karịsịa ndị ahụ nke ahụ ga-aba uru na ọrụ ị nwere ike ịrụ.
Ndepụta nke akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ma nweta asambodo
Y’oburu na isonye na nkuzi na nkuzi - dee banyere ya n’ime CV gi. Gbado anya na ihe omume ndị ahụ nke ahụ nwere ike ịba uru n'ọnọdụ ọ masịrị gị.
Kwuo ihe mgbaru ọsọ ọkachamara
Y’oburu n’ichoo CV. ị nwere ike ide ahịrịokwu ole na ole gbasara ihe ịchọrọ iji rụzuo ọrụ gị. Kwupụta ihe bụ ebumnuche gị maka inwekwu mmepe, kọwaa ihe ị na-achọ. N'ihi nke a, ị ga - egosi ndị ọrụ nwere ike ịchọrọ nwee echiche maka onwe gị ma mara ihe ị chọrọ inweta n’ọdịnihu.
Iwu dị mkpa - melite data
Ekwesịrị imelite CV nke ọkachamara ahụ na usoro na-aga n'ihu. Okwesiri imeghari ya na oru a choro, na-ekwusi ike banyere njirimara na ọrụ nke onye were gị n'ọrụ nwere ike ịchọrọ.
Eziokwu na Dubai n'elu ihe ọ bụla nke ndị ọzọ
Enweghị ozi ugha nwere ike itinye ya na ịmalitegharịa. Etinyekwala aka oru ihe ndia n’inweghi. Ugha gha gh’abia n’iru mgbe ikike ndi a kọwara ị ga-ekwupụta.
Ngwá ọrụ bara uru - CV creator online
Onye okike CV nwere ike inyere gị aka ịkwadebe ịmalite ga-agụrụ gị nke ọma. Site na ya ị gaghị echefu gbasara itinye ihe dị mkpa na akwụkwọ ahụ. 'Ll ga-elekọta anya nke ọma. Cheta na CV gi bu pass gi iji chọta ọrụ nrọ gị.
Kedu otu esi eguzo ma mepụta CV mbụ?
Akụkọ ndu o nyere onye were gị n’ọrụ kwuru ọtụtụ ihe banyere gị. Nwere ike ịgụ site na ya ma ị attentiona ntị na nkọwa, ma ị bụ ndị ziri ezi na… okike.
Nkwekota na-akwadoghị nke ọkachamara n'ịzụ ahịa ma ọ bụ onye mmepụta ime nwere ike ịdọrọ uche. Lelee otu i nwere ike isi gosipụta ezi uche site na itinye, n'etiti ndị ọzọ, maka ọnọdụ nke onye na-elekọta ụmụaka, nri ma ọ bụ onye na-edozi isi.
CV mara mma ma dị mma, ma ọ bụ gịnị?
Ihe omuma ihe omumu, amaliteghari dika ihe onyonyo vidio - na ulo oru ụfọdụ ihe omumu ihe omimi puru iche nwere ike imata anyi. Agbanyeghị, ị kwesịrị inwe mmetụta dị nro ma chee ma ngwọta a ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị.
Ọ bụghị onye ọ bụla ga-anọrọ onwe ya họrọ maka ihe a na-enwetụbeghị ụdị CV Echefula na ọdịnaya dị mkpa karịa ụdị. Ọrụ nke ikeji obi ike na ihe okike agaghị ewute, dịka ọmụmaatụ:
A na-atụ anya ka onye na-ahụ maka ire ahịa nwee ike ịja onye ahịa ya mma. Iji mee ka onye were gị n'ọrụ kwenye na ị nwere ike ree ma kwalite… kwalite onwe gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike inye CV n'ụdị usoro vidiyo.
Imepụta CV Design
Ivitymepụta bụkwa ihe dị mkpa maka ndị na-emepụta ime ụlọ. Mgbe ị na-achọ ọrụ na ọrụ a, ị kwesịrị ị na nzọ na arụmọrụ malitegharịa na okirikiri nhọrọ ukwuu ọdịnaya. Akwụkwọ ahụ kwesịrị ịgụnye foto ndị ọkachamara nke na emechara nke oma.
Onye nlekọta / onye nkụzi CV
Teacher bụ onye nkuzi asụsụ mba ọzọ na-eduzi ọmụmụ maka ụmụaka? Ma ọ bụ ikekwe you na-achọ ọrụ dika onye nkuzi ulo akwukwo? You nwere ike gosipụta ụzọ okike ma, dịka ọmụmaatụ, ịmepụta CV n'ụdị ọrụ aka (ihe mkpuchi ma ọ bụ ihe eji achọ mma).
Okike bu ihe di nkpa di nkpa maka ndị ọkachamara tinyere onwe ha na nka culinary. Iji gosipụta ịdị nkọ gị, ị nwere ike inye onye were gị n'ọrụ ihe CV nwere foto ọkachamara nke efere emere dịka usoro nri gị siri dị. I nwekwara ike nwaa ide ndu banyere udiri akwukwo… akwukwo nri.
Ma ọ bụ na ọ ga-aba uru iziga onye were gị n'ọrụ Nnukwu achicha ebe ị nwere ike “dee” nkà gị site na iji icing maka nzube ahụ? I nwekwara ike ighe kuki na ihe ijuanya iji zoo CV gi.
Mee-elu omenka / etemeete omenka CV
Ihe onyonyo a na-ese site na CV nwere ike itule ma dikwa ire, ma n’otu oge doo anya. Ọ bara uru itinye njikọ na ngwa Pọtụfoliyo, na nke onye were gị n'ọrụ ga-enwe ike ịhụ, dịka ọmụmaatụ, fim nke ị na-eme ihe nkiri ma mekwaa ya.
Ngwaọrụ multimedia nwere ike itinye na CV gị mgbe ị na-achọ maka ọkwa onye na-edozi isi. Ị nwere ike ịhapụ onwe gị iji tinye foto gị na arụ ọrụ na akwụkwọ ahụ. Ọ dị mkpa na foto bụ ọkachamara, ntụgharị ezi ọkụ, trimmed, wdg.
Gbaa mbọ hụ na ihe okike gị anaghị egbochi ndị ọkachamara. CV bara uru abughi ihe ana echefu echefu, odi nkpa ma nwekwaa ya isi ihe omuma banyere ihe omuma, ikike na ihe ndi ozo di iche. Mepụta ọkachamara iji malitegharịa site na iji ọkachamara Pracuj.pl.
Ihe edere na CV gị mgbe ị na-enweghị ahụmahụ
Edemede CV maka ọrụ mbụ bụ nnukwu ihe ịma aka nye ọtụtụ mmadụ. Iji mee ya n'ụzọ ziri ezi, ịkwesịrị ịchọta oge ma mee ka isi gị kwụrụ ọtọ - isiokwu ahụ ga-enyere gị aka n'akụkụ ndị ọzọ
Ozi ọma banyere mbido - ọtụtụ ihe dị mkpa iji mepụta ịmalitegharị dị n’isi gị. Mgbe ị na -eme CV, ị ga-abanye n'ime nooks na crannies nke ebe nchekwa gị na-eche banyere onwe gị, ndụ gị na ahụmịhe ndị ọkachamara na ike gị na agụụ.
Malite na Education - Ụlọ akwụkwọ agwụla
N'ime “agụmakwụkwọ” ngalaba, anyị ebe Ọmụmụ nke na - aga n'ihu ma ọ bụ dechara (bachelọ, nna ukwu, ọmụmụ oge mbụ, wdg) ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ zuru ezu. Anyị nwekwara ike itinye ozi ebe a na mgbanwe mba ofesi.
Anyị anaghị abanye ụlọ akwụkwọ ndị gara aga - ụlọ akwụkwọ sekọndrị, obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ elementrị. Ihe dị iche ga-abụ ụlọ akwụkwọ dị elu, nke profaịlụ na ọkwa ya gosipụtara enwetara ndị ọzọ na nkà, dịka ọmụmaatụ, ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwere asụsụ Spanish.
Ahụmahụ ọkachamara na CV
Ọ bụrụ na ị nweela ahụmịhe ọrụ, kọwaa kpọmkwem ihe ị mụtala na kedu ihe ị mụtaworo. Nwere ike inweta ahụmịzụ gị, ọrụ nka na ọrụ ndị dị ịtụnanya na ahụmịhe gị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweelarị ahụmịhe sara mbara metụtara ọmụmụ gị ma ọ bụ ọrụ ọdịnihu gị, ị gaghị abanye ọrụ ọzọ ma ọ bụ ọrụ oge na CV gị. Gbado anya na na-akowaputa ihe ndi omuma ndi gara aga mere.
Ọrụ gị n'oge ọmụmụ gị bụ ụdị ahụmịhe e nwetara. Mee ka ihe ndị ị rụzuru pụta ìhè na ngalaba "Ọrụ ndị ọzọ".
Ike na ọdịmma na CV
Na mgbasa ozi ọrụ, a na-enyekarị nkwado maka asọmpi chọrọ onye chọrọ ka ọ dị. Kedu ụdị mmadụ ụlọ ọrụ enyerela na-achọ, I nwekwara ike iwepu aka na nhazi oru ya na ndu ya, nke akowara na Taabụ Onye Ọrụ na-ahụ maka ọrụ na ozugbo na weebụsaịtị nke ọtụtụ saịtị ọrụ na Dubai na Abu Dhabi.
Ikike gị na ọchịchọ gị, nke dabara na atụmanya nke onye ọrụ, tinye na akụkụ ndị dị mkpa nke CV gị.
Mgbe ị na-eche banyere onwe gị, oge eruola maka nzọụkwụ ikpeazụ, nke ga-akwadebe gị ịmepụta ezigbo CV. Na-anakọta ihe ndị a, nọdụ ala na kọmputa na ... njikere :)!
Foto ọkachamara maka CV
Ezigbo foto CV na-egosi oghere mmeri site n’ubu, jiri ezigbo ụtọ na ihu ọchị. Should ga-eyi uwe elu ma ọ bụ uwe elu nwanyị na-acha odo odo, nke na-anọpụ iche na nke azụmahịa foto. Cheta foto di elu. Ọ bụrụ n’inweghị foto, mana echekwala - ị nwere ike izipu CV gị n’enweghị foto. Bụ na mbido ọrụ gị, ọ bara uru ịse foto dị otú a - ọ ga-aba uru maka ọdịnihu. You nwere ike iji ọrụ ndị na-ese foto ma ọ bụ sonye na nnọkọ azụmahịa na-akwụghị ụgwọ, nke bụ ọtụtụ oge ihe omume ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ mmemme ọrụ.
Asambodo nke gụchara akwụkwọ, akwụkwọ natara, akara na icheiche na CV
Chịkọta ndị zụlitere n'ezie ị ga-abụkwara onye were gị n'ọrụ uru. Ọ bụrụ n’icheta ụbọchị ngwụcha nke ihe ọmụmụ na onye nhazi, ịkwesighi ịchọ aha mmalite. Ọ bụrụ n ’ejighi ejighị n’aka, wee gaa na akwụkwọ ndị anakọtara.
Dee ubochi na otite ha diri akwukwo ahu, nye ha ọzụzụ. Gosiputa ihe nd ị nwere n'ezie zụlitere gị ma tụọ aka n'inweta.
Ezi ihe nlereanya nke CV gụnyere aha ọzụzụ, onye nhazi, ụbọchị na ihe ndị ị na-ewere na ụlọ akwụkwọ dị na Dubai.
Kedu ka esi nweta ahụmịhe mbụ ma mezie CV gị?
Kedu ihe mmemme ntụrụndụ nke na-enye iji nweere onwe gị oge ga-eme ma ị nweta ọrụ mbụ? Kedu njikọ dị n'etiti nbudata na ụlọ ọrụ nrọ gị na ihe ndị a na-eme n'oge ezumike ?.
Kedu ihe dị mkpa ịhazi ihe omume onyinye, ememme ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ nzukọ ọmụmụ sayensị maka azụmahịa? Ọ amama na ihe a niile na-arụ nnukwu ọrụ! Ndị were ọrụ ji akpọrọ ndị na-aga ọrụ ike, ndị gbasiri ike ma jupụta n'ike.
Kedu ihe ga-eme ka CV gị dị na Dubai?
Skills nwere amamịghe ma ọ bụ nwee mmasị pụrụ iche? Ma obu ike imeri ihe nrite na asọmpi nke ụlọ ọrụ? Mgbe ị na -eme CV, biko mee ka onye na-arụ ọrụ nwee ike ịrụ ọrụ. Dị njikere na foto gị kwekọrọ na akwụkwọ mbanye.
Ka ị matakwuo ma mara. Ohere dị ukwuu na ịchọta ọrụ ịchọrọ. Ọ dị mkpa ka ịmara otu esi eweta ike nile inwere. Iji mee ka CV gị mara mma, tinye ihe dịka, dịka ọmụmaatụ, nke ahụ dị mkpa na UAE.
Ihe omuma puru iche
Ntinye aka na asọmpi mba ụwa, nweta ihe nrite maka ụlọ ọrụ, mmejuputa atumatu dị iche iche na-arụkọ ọrụ na ndị ọkachamara kachasị mma - n'ikwu banyere ahụmịhe ndị ahụ, ị ​​ga-egosi onwe gị dịka mmadụ tinyere aka na mmepe ọkachamara. Ọ dị mkpa na ozi ị na-enye na-ezo aka n’ihe ndị were gị n’ọrụ chọrọ.
Japanese, Chinese, Korean, Czech, Russian, Dutch - ndị a bụ ọmụmaatụ nke asụsụ mba ọzọ nke ihe ọmụma ha na-adịkarị obere karịa ikike iji, dịka ọmụmaatụ, Bekee. Ihe omuma banyere asusu amusu nwere ike buru oke uru nwekwuo ohere gi na ahia aka oru.
Ọrụ afọ ofufo na ọrụ ndị ọzọ rụrụ na mpụga oge ọrụ.
You bụ onye ọrụ afọ ofufo na ntọala? Ma ọ bụ ikekwe n’oge ị na - akwụghị ụgwọ, ị na-ahazi ụmụaka egwuregwu egwuregwu ka ị na-eme ihe maka abamuru nke ndị obodo? Activitiesme ihe omume ndị a na-egosi na ị nwere ike itinye aka na ọmịiko.
Ọ dịkwa mma banyere ihe ndị na-enyere gị aka ịzụlite nkà. Chess na-akụzi ezi uche dị na ya. Njem a na-enyere gị aka ịmụ asụsụ mba ọzọ. Ndinam mbiet etie ntiense aban̄a ime, wdg.
Ọ dị mkpa na a ga-egosipụta ihe ngosi nke ga-achịkwa ndụ gị dị mma na legibly. N'ihi nke a, CV ga-enwekwu nkwupụta. Ọ dị mma ịhapụ fon dị ka Courier, Comic Sans ma ọ bụ Vivaldi. Ị nwere ike ịbanye, dịka ọmụmaatụ, Calibri ma ọ bụ Arial.
Idetu foto na dọkụmentị na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịgakọ rụpụta ihe na onye ha rụzuru. Foto ọkachamara nwere ike ime ka akwụkwọ a dị mma. Foto nwere ike ime ka echetara gị ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, egosipụtara gị ya na uwe elu nwere hashtag: #task m.
Ihe ndi ozo di iche iche
Ihe onyonyo maka CV, infographics, usoro iheomume - igosiputa ọdịnaya n’ụdị onyonyo na atụmatụ dị iche iche na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ozi dị mkpa, dịka nkọwa kọntaktị, iru eru, wdg. Ihe osise nwere ike ime ka akwụkwọ ahụ mara mma. N'otu oge ahụ, ọ bara uru icheta na ọdịnaya a, ọ bụghị ụdị ịmalitegharị, bụ ihe kachasị mkpa.
Agba na CV gị
N'agbanyeghị agba ndị ị họọrọ, CV gị doro anya ma doo anya. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ maka ụlọ ọrụ ejiji, ịnwere ike iji akụkọ Pantone nke edepụtara na agba kacha agba kacha mma n'oge oge enyere.
Gbakwunye asambodo na CV gị na-egosi na ị nwere nka ị kpọtụrụ. I nwekwara ike tinye Pọtụfoliyo ma ọ bụ njikọ na websaịtị enwere atụ nke ọrụ gị.
Ịgụ ihe karịa ihe niile
Mgbe ị na-etinye ihe ndị ọzọ okike na CV gị, kpachara anya. Ihe ndu pụrụ ịbụ ihe pụrụ iche ma pụọ ​​iche site na ngwa ndị ọzọ. Ọ dị mkpa na, na ọ bụ nke a pụrụ ịgagharị agagharị ma gosipụta n'ụzọ doro anya na ị bụ ezigbo onye chọrọ maka inwe ohere.
Kedu esi dee CV oge a na ụdị nke Emirates?
Ịdị mma, dị mfe, na ịkọwapụta na nkọwa zuru ezu banyere ọrụ a rụrụ, ọkwa nke asụsụ mba ọzọ na ihe ndị ọzọ. Ụdị CV a kwesịrị ịdị njikere n'afọ ọhụrụ ahụ.
Ihe odide a ghaghi inwe okike ụdị iji dọta uche. Ọ dị mkpa na ọ na-aza isi ihe ndị achọrọ na ọrụ enye.
CV ekwesịghị ịdị ogologo. Aga m arịọ maka ozi ndị ọzọ zuru ezu na nzukọ mbanye. Inghụ ozi kacha dị mkpa nke akọwapụtara na nlele mbụ - Agaghị m anọ ogologo oge na akwụkwọ dị otú ahụ. Enwere m ekele nke ukwuu mgbe CV ndị ahụ kwekọrọ na ọrụ m nyere na mgbasa ozi.
Ekwenyesiri m ike na nwa akwukwo ahụ na-agbalịsi ike, ọ dịghịkwa ezigaghachi na nnukwu ọnụ ọgụgụ ọ bụla nyere ya, ma na-elezi anya maka onye ọrụ were ya.
You lekwasịrị anya na mmepe? You mezuru ebumnuche gị? You na-enyocha ahụmịhe ọkachamara gị? Ọ na-esiri gị ike ịbanye na ọnọdụ ọhụrụ? Jiri okwu ụfọdụ dee gbasara ya na CV gị.
N'ihi nke a, ị ga-eweta onwe gị ma mee ka ohere gị bawanye. Ọ dị mkpa na ihe ị na-ede na-akwado ihe atụ, yabụ na ọ na-ezo aka ahụmahụ ọkachamara ma na-egosi na ị nwere ikike ndị ọrụ were.
Kedu ihe CV kwuru banyere nwa akwukwo ahụ?
CV gị nwere ike ịgwa gị na ị bụ mmadụ nke nwere ike itinye aka, nwee echiche na - adịghị ahụkebe ma a na - akwali gị ịgbalị atụmatụ ọrụ gị. Ka ewere maka CV iji nye gi ezigbo asambodo, echefula ihe ndị dị mkpa dịka:
Imelite ozi ezigara di na ndu gi a adighi agha agha. Mgbe ị na-ebido afọ ọhụrụ, lelee CV gị ma gbakwunye ikike na asambodo ị na-enweta. Ga - eme ya ọbụlagodi na ị chọghị ịgbanwe ebe ọrụ gị n'oge na - adịghị anya. Ọ bụ ụzọ dị ukwuu iji chịkọta ihe ndị ị rụzuru n'afọ niile.
Ọ dị mma na mgbe aha ụlọ ọrụ ahụ onye onye ọrụ a na-arụ ọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ, dee otu obere nkọwa gbasara ụlọ ọrụ nke onye ọrụ ahụ nwere ọkachamara, dịka onye na-emepụta ígwè ma ọ bụ onye nkesa nke ekwentị mkpanaaka.
Ọ ga-amasị m ịgụ na CV gbasara ọrụ onye chọrọ ka nwa akwụkwọ na-arụ emeela ndị m were ọrụ nke gara aga na ndị kwekọrọ n'ọrụ m na-enye. Enweghị mkpa ide na onye na-arụ ọrụ dị ka onye na-eche 15 afọ gara aga ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ndoro ndozi nke ugbu a n'ọkachamara ọrụ ọrụ.
Nchikota onyonyo na nka. You chọrọ inwe echiche ziri ezi banyere onye were gị n'ọrụ? Jiri nwayọ mepụta ụdị nke gị. Dabere na nhọrọ ndị ọkachamara ma zụlite n'otu usoro. Ọzọkwa, hụ na akwụkwọ ndekọ gị na ihe ndị ọzọ gbasara gị gbasara gị. Echiche bụ na CV gị, akwụkwọ ozi mkpuchi, Pọtụfoliyo na omume gị na-emeju ibe ha.
Ọdịnaya na-egosi “ikike echi”. Can nwere ike ịrụ ọrụ n'ime otu, gosipụta omume na-eme ihe ma nwee ikike iji usoro mgbasa ozi ọhụụ? Echefukwala ịkọ ya na CV, na-akọwa ahụmịhe ahụmịhe ndị gị mere na ihe omume ị rụrụ.
Usoro ihe eji mara CV bu otu n’ime ihe kachasi gosiputa. Ọ bụrụ na ọ dakọtara n’ihe onyonyo gị, inwere ike idobe ihe osise n’ihe odide ahụ ma ọ bụ kọwaa ahụmịhe ahụ site na iji usoro iheomume. Ọ dị mkpa na ụdị ọgwụgwọ a nwere mmetụta dị mma ọ bụghị naanị na mma kamakwa n’agụ akụkọ banyere ndụ. - Mgbe ị na-agụ CV, ọ dị m mkpa na ekwesịrị ịchebara ozi kachasị mkpa dị na ya n'ọrụ iji jiri nkwuwa okwu na gosi n'okpuru.
Eziokwu nke CV gị na UAE
Ejila ihe oyiyi na-enweghị mmekọrita nke eziokwu. Zụlite onwe gị, meziwanye nkà gị ma bụrụ onwe gị.
Ejiri CV gị ahaziri atụmanya nke onye were gị n'ọrụ?
Documentmepụta akwụkwọ dị ịtụnanya, nke dị oke mma nwere ike iwetara gị uru, mana naanị n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ. Cheta nke ahụ ọdịnaya ahụ yana mkpa ya maka ihe ndị chọrọ onye were gị n'ọrụ chọrọ dị mkpa karịa ụdị. Ọ dịkwa mkpa na ahaziri CV ka ọrụ a. Ọ bụrụ na ị na-etinye akwụkwọ maka ọkwá na ngalaba ndekọ ego, ọ ka mma izere ụcha agba na foto nka.
Ihe ndị dị otú ahụ ga-adị ka ihe na-ekwekọghị n'okike. Ọ dị mma ịgbapụ mana n'ụzọ dị mma. N'ihe banyere oru nka kwesiri ihe omuma karia ihe nile, mmadụ nwere ike ịpụ iche na nke ochie ochie wee tinye ụzọ ngosipụta siri ike, jiri egwuregwu na-egwu ya ma ọ bụ ịgbanwe okirikiri ọdịnaya.
Mgbe ị na-achọ ọrụ, ọ bara uru ịmeghe ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ ma jiri ya. Iji maa atụ, inwere ike inyocha ihe ngwa ngwa Pracuj.pl, nke na-enye gị ohere ịzaghachi ngwa ahịa ahụ ma nye gị ohere inyocha ọnọdụ nke ngwa gị.